Rag Hubeesan oo ka dagaalamaya meel aan ka fogsyn Madaxtooyada iyo Ciidamo xoogan oo… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd February 2018 A warsame Af Soomaali 0
February 23, 2018–Rasaas ayaa wali ka dhaceysa agagaarka xarunta Madaxtootada ee magaalada Muqdisho, waxaana wararka aan helnay sheegayaan in rag hubeesan ay ku jiraan meel aan ka fogeyn xarunta Madaxtooyada.
Sida aan Wararka ku helnay rag hubeesan oo ka degay dhoor gaari ayaa ku jira dhabarka dambe ee Hotelka Siyaad oo kuyaala albaabka laga galo Madaxtooyada, waxaana ragaasi go’doomiyay Ciidamada ilaalada Madaxtooyada iyo kuwa NISA.
Gaadiidka ay ka dageen ragaasi ayaa lasoo sheegayaa in ay yaalaan agagaarka halka laga galo Madaxtooyada, waxaana laga cabsi qabaa in gaadiidkaasi ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa.
Rasaas goos goos ah ayaa ka dhacaysa afaafka hore ee xarunta Madaxtooyada, waxaana aaga Madaxtooyada buux dhaafiyay ciidamo badan oo doonaya in ay go’doomiyaan raga hubeesan ee la tuhmayo .
Gaadiid ay wataan rag hubeesan ayaa xoog uga gudbay koontarool kuyaala Isgooska Sayidka, waxaana rasaas xoogan ku furay ciidamada ilaalada Madaxtooyada oo ku sugnaa koontaroolka laga galo Villa Somalia.